Rafitra fanamainana vita amin'ny beton feno Snowkey
Fujian snowman co. ltd, Niorina tamin'ny taona 2000, mitombo tsikelikely ary lasa orinasa manerantany miavaka amin'ny famokarana milina ranomandry, fitaovana fampangatsiahana ary fitehirizana mangatsiaka, indrindra amin'ny masinin-dranomandry sy ny tontolon'ny rafitra fanamafisam-peo, ny anjaran'ny tsena amin'ity sehatra ity, SNOWKEY no tampony 1 ao Ch ...
Tehirizo amin'ny ranomandry flake ny legioma
Ice flake: ny vahaolana manerantany ho an'ny fampiharana marobe amin'ny indostrian'ny sakafo, fa koa ho an'ny indostria, hopitaly ary fialam-boly! Flake Ice Feature • Niorina mivantana tamin'ny maripana ambany, ny ranomandry dia mangatsiaka toy ny tsofina-8 ℃ • Vantany vao vita, maina sy madio, tsara endrika, madio ara-pahasalamana sy milamina ny flakes ranomandry ...
2021 Expo Refrigeration China
Ny lohahevitry ny 2021 China Refrigeration Exhibition dia ny "Fanamafisana ny fototra, ny kalitao voalohany, ny synergy anatiny sy ivelany, ny fivoaran'ny karbaona ambany". Snowman Group mizara ny foto-kevitsika manokana momba ny "cycle cycle", "tsy miandany amin'ny karbaona", "lamina vaovao", "eo ambanin'ny toe-javatra vaovao", ary "refre ...
Ny famaritana ny milina ranomandry fantsom-panala Snowkey
● Ny famolavolana rafitra rano manokana dia miantoka ny kalitaon'ny ranomandry tsara kokoa, eny na dia ny hateviny, ny mangarahara ary ny fahadiovany. ● Ny mpanao ranomandry dia namboarina sy novokarina arakaraka ny fenitry ny sambo fanerena, mafy orina, azo antoka ary azo antoka. ● Ny fantsom-pamindrana hafanana mahomby dia raisina hanatsara ny endrik'ilay vata fampangatsiahana ...
Fametrahana milina ranomandry fantsona
1. Dingana fitondrana sy famoahana satria mavesatra ny vatan'ny milina ranomandry, dia takianay ny mpampiasa anay hanome trano fampiakarana sy fitaterana mandritra ny famoahana entana sy ny fivezivezena mifanaraka amin'ireto torolàlana manaraka ireto: 1) fiara toy ny van sy tr ...
Ahoana ny fomba hisafidianana milina fanala mangatsiaka mivantana?
Ny masinin-dranomandry dia karazana mpanao ranomandry, mizara milina gilasy mivantana ary milina ranomandry sakana rano. Ny refy vita amin'ny ranomandry dia lehibe kokoa noho ny vokatra ranomandry. Ny vaingan-dranomandry dia be habe, ambany ny maripana, tsy mora levona, mora entina ary mitahiry lava ...
AHOANA NO HANAOVANA ICE BLOCK?
Snowkey Block Ice Machine Ny rano dia araraka anaty lasitra vy lehibe ary apetraka ao anaty tanky lehibe misy brine mangatsiaka hatramin'ny 8 ora. Rehefa mangatsiaka tanteraka ny ranomandry blok dia esorina ao anaty tanky izy ireo ary alentika anaty rano mafana. Mampitsonika ny velaran'ny ...
AHOANA NO AZONAO MBA HITAOVANA NY JONO?
Manomboka ny vovo-dranomasina fanodinana ranomasina raha vao tratra ny trondro. Tsy ho ela dia very ny fihavaozana. Na izany aza, ny fanimbana bakteria sy autolytic dia misy amin'ny maripana sasany, ohatra, ny bakteria sy ny anzima ao anaty trondro avy amin'ny rano mangatsiaka, dia ampifanarahana amin'ny maripanan'ny ranomasina eo anelanelan'ny 5 ° C- 10 ° C. ...
Rano ho an'ny fanaovana ranomandry amin'ny jono
Tokony hatao amin'ny rano foana ny gilasy izay azo sotroina. Ny rano izay tsy azo sotroina dia hisy bibikely izay manimba ny fahasalamantsika. Ireo dia hamindra ny trondro rehefa mitsonika ny ranomandry. Rehefa tsy dia misy na tsy misy ny rano velona dia azo ampiasaina ny ranomasina. Na izany aza, nanohana ...
Inona no fomba marina hampiasana ranomandry amin'ny fanodinana trondro?
Milina misy ranomandry Flake Snowkey dia iced noho ny antony roa: • Mba hanala ny hafanana amin'ny trondro ary hampangatsiaka azy hatramin'ny 0 ° C; • Manala ny hafanana miditra amin'ny fitoeran-trondro ao amin'ny manodidina. Na izany aza, tsy maintsy avela ny fotoana hahaverezan'ny hafanana ny trondro. Ankoatr'izay, ny halaviran'ny trondro amin'ny ...
1. Fampiasam-bola amin'ny fitaovana Amin'ny ankapobeny, ny fampiasam-bola voalohany amin'ny rafitra fanamafisana amoniaka lehibe sy salantsalany dia somary avo kokoa raha oharina amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny rafitra fampangatsiahana freon. 2. Vidin'ny asa Ny vidin'ny amoniaka dia ambany kokoa, ny vata fampangatsiahana ...
Inona no olana mety hitranga mandritra ny fitehirizana ranomandry tsy misy rafitra mandeha ho azy?
Ny fitehirizana ranomandry mahazatra Snowkey Ny ankamaroan'ny olana amin'ny fitehirizana ranomandry dia mipoitra avy amin'ny fametahana sy ny fampifangaroana ireo poti-dranomandry. Mamoaka clumps izay sarotra tantanana izany. Ankoatra ny vokatry ny ranomandry lena voalaza etsy ambony, ny fusion dia mety hitranga noho ny tsindry. Mba hisorohana ireo olana ireo dia ilaina ny mahatadidy ...